Madheshvani : The voice of Madhesh - कर बढाएर विकास हुँदैन : लोकनारायण यादव
कर बढाएर विकास हुँदैन : लोकनारायण यादव
मेयर, पर्सागढी नगरपालिका, पर्सा
२०७६ साल भदौं १३ गते शुक्रबार
० जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर आएदेखि जनताले महसुस गर्ने केकस्ता कामहरू गर्नुभएको छ ?
— चुनावका बेला जनताहरूले जे कुराहरूको माग गरेका थिए, ती कामहरू नै हामीले अगाडि बढाएका छौं । जस्तै : शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिंचाइ, कृषि लगायतका क्षेत्रमा काम अगाडि बढाएका छौं । त्यसमध्ये कतिपय काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय काम जारी नै छ ।
० निर्वाचनका बेला के–के प्रतिबद्धताहरू गर्नुभएको थियो ?
— शिक्षामा सुधार गर्ने, सुलभ र सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवाका उपलब्ध गराउने, बाटोघाटो निर्माण गर्ने, कल्भर्ट बनाउने, वातावरणको क्षेत्रमा वृक्षरोपणजस्ता कार्यहरू गर्ने, सुशासनका क्षेत्रमा पनि काम गर्ने प्रतिबद्धता दिएका थियौं । हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने क्रममा छौं ।
० भनेपछि, पर्सागढी नगरपालिकाका जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति गरिरहेका छन् ?
— हो । तर, संघ र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने केही कार्यहरू बाध्यकारी भएकोले चाहेर पनि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । संघ र प्रदेश सरकारले समयमै हामीलाई ऐन कानूनहरू बनाएर नदिँदा हामीले चाहेर पनि जनतालाई ती सेवाहरू दिन सकिरहेका छैनौं । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक समस्याहरू देखिएका छन् । शिक्षक व्यवस्थापन, कर्मचारीको अभाव लगायतका समस्याले गर्दा अलि खल्लो महसुस भइरहेको छ ।
० जसरी दुई दशकदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थियो, तपाइँहरू आएपछि जनताका अपेक्षाहरू कस्तो पाउनुभयो ?
— यत्रो लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थामा जब हामी निर्वाचित भएर आयौं, त्यसपछि जनताका आशा र अपेक्षा तीव्र देखियो । हामीले ती सबैलाई सकारात्मक लिएर काम गरिरहेका छैनौं । सुरूमा हामी अलमलमा थियौं । अहिले पनि संघ र प्रदेश सरकारले हामीलाई ऐन कानूनहरू बनाएर दिँदा हामीले जनतालाई छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्न सक्थ्यौं ।
० सिंहदरबार गाउँमा आएको छ ?
— जुन प्रकारले सुरूमा प्रचार गरिएको थियो कि स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा त्यसरी हामीले महसुस गरेका छैनौं । किनकि संविधानले हामीलाई दिएका कतिपय अधिकारहरू ऐन कानून नबन्दा उपयोग गर्न पाएका छैनौं । शिक्षाकै क्षेत्रमा हामीलाई पूर्ण अधिकार दिएको छैन । त्यसैले, सिंहदरबार गाउँमा हामीले पूर्णरूपमा महसुस गरेका छैनौं ।
० काम गर्न केकस्ता चुनौतीहरू आउँछन् ?
— अहिले संरचना भएकोले विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन् । त्यसमा पनि हाम्रो नयाँ नगरपालिका हो । पाँचवटा गाविस मिलाएर पर्सागढी नगरपालिका बनाइएको हो । नगरपालिका कार्यालय व्यवस्थापनदेखि विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउँछन् । तर, हामीले विस्तारै सबै समस्याहरूको समाधान गर्दै काम गरिरहेका छौं ।
० प्रदेश सरकारको बेटी बचाउ, बेटी पढाउ कार्यक्रम पर्सागढीमा कतिको लागू भएको छ ?
— त्यो त प्रदेश सरकारले आफै सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, जुन किसिमले नारा दिइएको थियो, त्यो किसिमको काम भइरहेको छैन । त्यो अभियान सञ्चालन त भएको छ तर जुन गतिले हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो देखिएको छैन । त्यसैले, बेटी बचाउ, बेटी पढाउ अभियान खासै प्रभावकारी भएको छैन ।
० पर्सागढीमा करको दायरा कस्तो छ ?
— हामीले कुनै किसिमको कर बढाएका छैनौं । विगतमा करका जुन दायरा थियो त्यसैलाई निरन्तरता दिएका छौं । कर बढाएर पर्सागढीको विकास हुँदैन, यो कुरालाई हामीले बुझेका छौं । यहाँका जनताको आयस्रोत के हो र कति कर लिनुपर्छ भन्ने कुराको ख्याल गरेर नै हामीले करको दायरा राखेका छौं । हामीले न्यूनतम् कर राखेका छौं ।
० पर्सागढीमा पर्यटनका सम्भावना के–के छन् ?
— पर्सागढीमा पर्यटकका धेरै सम्भावनाहरू छन् । यहाँ, वनजंगल, प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिकस्थलहरू पनि छन् । पर्सागढी एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो । पर्सागढीलाई विजयगढीको रूपमा चिनिन्छ । यहाँ विभिन्न मठमन्दिरहरू पनि छन् । गढीमाई भनेर प्रख्या शक्तिपीठ पनि छ । आमोदेवी मन्दिर पनि छ । जंगली जनावरहरू हेर्नका लागि पनि यहाँ पर्यटकहरू लोभ्याएको हुन्छ । त्यसैले, पर्यटन क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम ल्याएका छौं । पर्यटकलाई केन्द्रित गर्न हामीले होमस्टे, पार्क निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू ल्याएका छौं । हामीले चुरे संरक्षणका लागि पोखरीहरू पनि निर्माण गर्न लागेका छौं ।
० तपाइँहरूको गुरूयोजना के छ ?
— हामीले बाटोघाटो, रिङ्गरोड, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्थित गर्नु नै हाम्रो गुरूयोजना हो । पर्यटकीय क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै हामीले विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छौं । कृषिमा आधारित यो नगरपालिका रहेकोले यहाँ कृषकलाई अनुदानमा मलखाद्य, बीउबिजन लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने कार्यमा हामी लागिरहेका छन् । हामीले गत वर्ष पनि यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौं र यस वर्षमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू ल्याएका छौं ।